हचुवाको भरमा दुई दिन बिदा दिइयो., यसले कुनै प्रतिफल दिँदैन : योगेश भट्टराई – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०४, २०७९ समय: १५:२५:११
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले हचुवाको भरमा दुई दिन बिदा दिइएको बताएका छन् ।
आज (बुधबार) प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिदै भट्टराईले विकल्प नसोचेर हचुवाको भरमा सरकारले दुई दिन बिदा दिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ‘सरकारले दुई दिन बिदाको कुरा गरेको छ । दुई दिनको विदा केका लागि ? दुई दिन बिदा केका लागि ? पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’
उनले दुई दिन बिदा हुँदा राष्ट्रि श्रम शक्तिलाई अगाडि बढाउन नसक्ने बताए । ‘दुई दिन बिदाले कुनै प्रतिफल दिन सक्दैन । थप बिदा दिँदा राष्ट्रिय श्रम शक्तिलाई कसरी अघि बढाउन सक्छ ? देशको पर्यटन उद्योगलाई बढाउने उपाय नसोचेर हचुवाको भरमा बिदा दिइएको छ ।’
Last Updated on: May 18th, 2022 at 3:25 pm